Hello Nepal News » हाँस्दा स्वास्थ्यलाई फाइदै–फाइदा, यस्ता छन् हाँस्दाका फाइदाहरू !
हाँस्दा स्वास्थ्यलाई फाइदै–फाइदा, यस्ता छन् हाँस्दाका फाइदाहरू !
हँसमुख अनुहारले अरूको मन सजिलै जित्न सक्छ । त्यसैले, हँसिलो मुहार भएको मानिस सबैको प्यारो हुन्छ । प्रायः सफल मानिसका पछाडि हाँस्नु अर्थात् खुसी रहनुले विशेष अर्थ राखेको हुन्छ । अर्थात्, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जो मुस्कुराउन सक्छ, उसैको जीवन सफल हुन्छ । हाँस्नु स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत एकदमै फाइदाजनक मानिन्छ । हाँसो सर्वसुलभ प्राकृतिक औषधि नै हो । अब जान्नुहोस्, हाँस्नुका फाइदा :
तनाव कम :
स्वस्थ जीवन :
व्यवसायमा सफल :
सकारात्मक ऊर्जा पैदा :
सामाजिक सम्बन्ध विकास :
अमेरिकामा भएको एक अध्ययनले हँसिला मानिसको परिवारमा सम्बन्धविच्छेद कम हुने देखाएको थियो । मुस्कुराएर बोल्दा परिवारमा झै–झगडा कम हुने र सम्बन्ध सुमधुर रहने हुन्छ । यसले एक–अर्कामाथि द्वेषको भावना आउँदैन । फलस्वरूप सामाजिक सम्बन्धसमेत बलियो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति १९ पुष २०७६, शनिबार १४:३५